ကမ္ဘာကျော် နပန်းသမားဘဝနဲ့ စည်းစိမ်တွေကို စွန့်လွှတ်ပြီး ရဟန်းဝတ်နေတဲ့ ကိုယ်တော်နှစ်ပါး . . . – Pwintsan
ကမ္ဘာကျော် နပန်းသမားဘဝနဲ့ စည်းစိမ်တွေကို စွန့်လွှတ်ပြီး ရဟန်းဝတ်နေတဲ့ ကိုယ်တော်နှစ်ပါး . . .
June 26, 2020 ကြားသိရသမျှ
လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ စွဲလမ်းစိတ်တွေ၊ အတ္တတွေ၊ မာနတွေ၊ လောဘတွေ၊ စည်းစိမ်းတွေကြားမှာ ယစ်မူးအချိန်ကုန်နေတတ်ပြီး မတည်မြဲသောအရာကို တည်မြဲတယ် ထင်မှတ်ကာ ရန်သူမျိုး (၅)ပါးကိုတောင် မကြောက်တော့ဘဲ တတ်မက်နေတတ်ကြပါတယ်။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောတော်မူတဲ့ စွန့်လွှတ်ခြင်းဟာ မြတ်သောတရားဆိုပေမယ့် တကယ်တမ်းကျတော့ တစ်စုံတစ်ခု၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို လက်လွှတ်အဆုံးရှုံးခံဖို့ ဆိုတာ သာမာန်လူတစ်ယောက်အတွက် မလွယ်ကူလှပါဘူး။
ယနေ့ နေထိုင်တဲ့ လောကကြီးထဲမှာ ငါအစွဲစွဲပြီး နေထိုင်ရှင်သန်သူတွေများသလို ဇူဇကာပုဏ္ဏားလို သူတပါးပစ္စည်း အလကားရဖို့၊ သူတပါး အကျိုးနိမ့်ဖို့ အမြဲကြံစည်နေတဲ့လူတွေလည်း ဒုနဲ့ဒေးရှိပါတယ်။
တခြားလူမပြောနဲ့ ကိုယ်တောင် ယနေ့လား မနက်ဖြန်လား မသေချာတဲ့ ဘဝကြီးထဲကို ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် လောကပါလရဲ့ အေးချမ်းတဲ့တရားတွေကို ရှာတွေ့ဖို့လည်း အရေးကြီးပါတယ်။
အခုတစ်ခေါက်မှာတော့ နိုင်ငံကျော် နပန်းသမားဘဝနဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ၊ စည်းစိမ်ချမ်းသာမှုတွေကို အပြီးပိုင်ထားခဲ့ပြီး အေးချမ်းလှတဲ့ ဗုဒ္ဓတရားအရိပ်မှာ တစ်သက်သာ ခိုလှုံနိုင်ဖို့အတွက် ရဟန်းဘဝကို ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ သူနှစ်ဦးရှိခဲ့ပါတယ်။
သူတို့နှစ်ဦးလုံးဟာ အရမ်းကို ခင်မင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့အပြင် အေးချမ်းမှု တရားအစစ်ကို ရှာဖွေနေသူတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ရဟန်းကိုယ်တော်နှစ်ပါးဟာ နိုင်ငံကျော် နပန်းသမားဘဝနဲ့ စည်းစိမ်တွေကို ထားခဲ့ပြီး ဗုဒ္ဓစာပေကျမ်းဂန်တွေ ဖွံ့ဖြိုးနေဆဲ ဖြစ်တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ၊
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံစတဲ့ နိုင်ငံတွေကို ကိုယ်တိုင်ကြွရောက်ကာ (၁၅)နှစ်တိုင်တိုင် ဗုဒ္ဓစာပေတွေကို လေ့လာ သင်ကြားခဲ့ကြပါတယ်။
အခုချိန်မှာတော့ ရဟန်းနှစ်ပါးလုံးဟာ ဘာပကာသနမှ မပါတဲ့ ဟိံမဝန္တာတောနက်ထဲက ဓနိထန်းရွက်ကာထားတဲ့ ဝါးကျောင်းပေါ်မှာဘဲ ဓမ္မကို အဖော်ပြုပြီး ရွာအသီးသီး လမ်းအသွယ်သွယ်မှာ ရပ်ဆွမ်းခံကြွကာ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ မဟူ လှူဒါန်းတဲ့ သဒ္ဓါဆွမ်းတွေနဲ့သာ ပီတအဟာရကိုသာ မှီဝဲနေကြပါတယ်။
ကမ်ဘာကြျော နပနျးသမားဘဝနဲ့ စညျးစိမျတှကေို စှနျ့လှတျပွီး ရဟနျးဝတျနတေဲ့ ကိုယျတျောနှဈပါး
လူတိုငျးလူတိုငျးဟာ စှဲလမျးစိတျတှေ၊ အတ်တတှေ၊ မာနတှေ၊ လောဘတှေ၊ စညျးစိမျးတှကွေားမှာ ယဈမူးအခြိနျကုနျနတေတျပွီး မတညျမွဲသောအရာကို တညျမွဲတယျ ထငျမှတျကာ ရနျသူမြိုး (၅)ပါးကိုတောငျ မကွောကျတော့ဘဲ တတျမကျနတေတျကွပါတယျ။
ဗုဒ်ဓမွတျစှာဟောတျောမူတဲ့ စှနျ့လှတျခွငျးဟာ မွတျသောတရားဆိုပမေယျ့ တကယျတမျးကတြော့ တဈစုံတဈခု၊ တဈစုံတဈယောကျကို လကျလှတျအဆုံးရှုံးခံဖို့ ဆိုတာ သာမာနျလူတဈယောကျအတှကျ မလှယျကူလှပါဘူး။
ယနေ့ နထေိုငျတဲ့ လောကကွီးထဲမှာ ငါအစှဲစှဲပွီး နထေိုငျရှငျသနျသူတှမြေားသလို ဇူဇကာပုဏ်ဏားလို သူတပါးပစ်စညျး အလကားရဖို့၊ သူတပါး အကြိုးနိမျ့ဖို့ အမွဲကွံစညျနတေဲ့လူတှလေညျး ဒုနဲ့ဒေးရှိပါတယျ။
တခွားလူမပွောနဲ့ ကိုယျတောငျ ယနလေ့ား မနကျဖွနျလား မသခြောတဲ့ ဘဝကွီးထဲကို ရောကျတုနျးရောကျခိုကျ လောကပါလရဲ့ အေးခမျြးတဲ့တရားတှကေို ရှာတှဖေို့လညျး အရေးကွီးပါတယျ။
အခုတဈခေါကျမှာတော့ နိုငျငံကြျော နပနျးသမားဘဝနဲ့ အောငျမွငျမှုတှေ၊ စညျးစိမျခမျြးသာမှုတှကေို အပွီးပိုငျထားခဲ့ပွီး အေးခမျြးလှတဲ့ ဗုဒ်ဓတရားအရိပျမှာ တဈသကျသာ ခိုလှုံနိုငျဖို့အတှကျ ရဟနျးဘဝကို ရှေးခယျြခဲ့တဲ့ သူနှဈဦးရှိခဲ့ပါတယျ။
သူတို့နှဈဦးလုံးဟာ အရမျးကို ခငျမငျတဲ့ သူငယျခငျြးတှဖွေဈတဲ့အပွငျ အေးခမျြးမှု တရားအစဈကို ရှာဖှနေသေူတှလေညျး ဖွဈပါတယျ။
ရဟနျးကိုယျတျောနှဈပါးဟာ နိုငျငံကြျော နပနျးသမားဘဝနဲ့ စညျးစိမျတှကေို ထားခဲ့ပွီး ဗုဒ်ဓစာပကေမျြးဂနျတှေ ဖှံ့ဖွိုးနဆေဲ ဖွဈတဲ့ ထိုငျးနိုငျငံ၊
သီရိလင်ျကာနိုငျငံစတဲ့ နိုငျငံတှကေို ကိုယျတိုငျကွှရောကျကာ (၁၅)နှဈတိုငျတိုငျ ဗုဒ်ဓစာပတှေကေို လလေ့ာ သငျကွားခဲ့ကွပါတယျ။
အခုခြိနျမှာတော့ ရဟနျးနှဈပါးလုံးဟာ ဘာပကာသနမှ မပါတဲ့ ဟိံမဝန်တာတောနကျထဲက ဓနိထနျးရှကျကာထားတဲ့ ဝါးကြောငျးပျေါမှာဘဲ ဓမ်မကို အဖျောပွုပွီး ရှာအသီးသီး လမျးအသှယျသှယျမှာ ရပျဆှမျးခံကွှကာ ဆငျးရဲ၊ ခမျြးသာ မဟူ လှူဒါနျးတဲ့ သဒ်ဓါဆှမျးတှနေဲ့သာ ပီတအဟာရကိုသာ မှီဝဲနကွေပါတယျ။
ခဏခဏ သန့်ရှင်းရေး မပြုလုပ်သင့်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က အစိတ်အပိုင်း ၆ နေရာ (အရေးကြီးလို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်)